'American Horror Nhau' Mwaka 10 Inogovana Kutaridzika kweKure Yayo Jasi Kupfeka Monsters
musha Horror Varaidzo Nhau 'American Horror Nhau' Mwaka 10 Inogovana Kutaridzika kweKure Yayo Jasi Kupfeka Monsters
by Trey Hilburn III March 11, 2021 22,139 maonero
American Horror Story mwaka 10 nhau dzave kutanga kupisa. Isu takangogovana nhau dzakaratidza Macaulay Culkin's basa rakaratidzwa paRyan Murphy's Instagram. Zvino, isu tinowana kuzara-kwemuviri kutarisa kune zvimwe zvezvisikwa zvakapinza zvine mazino zvatakaona zvichinyombwa mune yakasetwa teaser kutanga kwegore rino.
Aya mahombe madhiri anomira akareba aine jira refu rakashongedzwa kuti ubatanidzwe nemeno avo akapinza. Izvi zvisikwa zvine mhanza zvinotarisa zvinotaridzika chaizvo handizvo? Kana iwe waona Nereza 2, icho chingave chiri chikonzero chekuti vakomana ava vatarisike kudaro.
Vampires mukati Nereza 2 akagovana zvakafanana kutarisa. Misoro ine mhanza, mazino anopinza uye majasi marefu. Hongu. Tarisa, tarisa uye tarisa. Mubvunzo muhombe ikozvino ndewokuti, aya mavampu here?
Iko kumashure kwemwaka uchangoburwa we American Horror Story iri Massachusetts. Angave here akapfurwa naRyan Murphy Lot raSarem? Iyo nharaunda neaya ane mhanza silhouettes chokwadi anotaridzika kunge anokwana mukati mushe, nenyika yaMambo. Ikozvino pane imwe Lot raSarem munzira munzira izvozvi, saka izvi zvinogona kureva kusanzwisisika nguva yekumwe kutora kune iyo nyika. Asi, kana iwe waona AHS iwe unotoziva kuti Murphy inosvetuka yakatenderedza madingindira kunge anopenga. Ndiri kureva, funga nezve AHS Asylum. Iyoyo yaibata nemhondi yekuuraya, zvikara, zvisvinu, vaiva nemasisita, uye kwaingova kutanga. Saka, pamwe aya mavampu, kana ari mavampu, anogona kungori chikamu chidiki chenyaya hombe.
Izvo hazvina kuita saMurphy kudzokorora madingindira uye American Horror Story akatoita mavampire kare. Saka, vari kushanyirazve? Zvakanaka, isu hatizive asi isu tinogona kufungidzira uye izvozvi chokwadi chiri kutarisa nenzira iyoyo.
Imi varume munofungei nezvezvazvino kubva American Horror Story? Funga izvi zvinogona kunge zviri zvaMurphy Lot raSarem? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Tarisa uone iwo mafoto kubva kwaDexter's Revival pano chaipo.